Badajoz - Kedu ihe kacha mma na atụmatụ kachasị mma iji mepụta | Njem zuru oke
Badajoz bụ obodo Spanish, isi obodo nke otu mpaghara nwere otu aha na nke Extremadura. Otu n’ime nkwụsị mbụ ya bụ nke a na-akpọ Plaza Alta. N'ime ya, n'oge ahịa Middle Middle mere. O nwere uzo abuo ma otu n’ime ha nwere uche.
Mgbe ọ gafesịrị, anyị rutere na mgbidi a na-akpọ Alcazaba, nke bụ otu n'ime ndị kasị ibu na Europe. N’agaghị echefu mgbidi ndị agha e wuru na narị afọ nke XNUMX. N'ezie, n'aka nke ọzọ, anyị enweghị ike ichefu Katidral nke San Juan Bautista na nnukwu ọnụ ụlọ obodo nke dị na Plaza de España.
N'ikwu okwu banyere n'ámá, Plaza de la Soledad pụtara dị ka otu n'ime ihe nnọchianya kachasị ma nwee ihe a na-akpọ 'Giraldilla'. N'ezie, na-ahapụ ntakịrị nke otu obodo ahụ, anyị na-ahụkwa akwa ọmarịcha ọzọ bụ ụlọ ihe nkiri nke Mérida. Agbanyeghi na emego ya otutu oge, o kwesiri ka nleta. A ụzọ anya azụ na-enwe dị ka mgbe n'ihu. Zafra bụ isi ihe ọzọ na Badajoz. N'ebe ahụ ị ga-ahụ Obí ndị isi nke Feria, Plaza Grande na Chica yana Chapel nke Cristo del Pozo.
Oge kacha mma iji gaa Mérida
por Ezigbo Badajoz eme 6 afọ .
N'oge mgbụsị akwụkwọ, Mérida bụ obodo mara ezigbo mma, ọnọdụ ya dịkwa nwayọọ. N'akuku Osimiri Guadiana, ejikere nke ọma, kpalie ...
Zafra, obodo nke isii kacha mma ibi na mba anyị
por Ezigbo Badajoz eme 10 afọ .
Ekwuputara nke a site n'ọmụmụ '' Ndụ nke ndụ nke obodo Spanish '(' Nhazi ogo nke ndụ nke ndị obodo ...
Extremadura isi nri
Nke a bụ usoro nri eji atọ ụtọ ọzọ sitere na mpaghara Badajoz, chee ma nwee obi ụtọ. Osikapa na nduku ...
por Ezigbo Badajoz eme 12 afọ .